MaidSafe Coin စျေး - အွန်လိုင်း MAID ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို MaidSafe Coin (MAID)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ MaidSafe Coin (MAID) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ MaidSafe Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $42 958 738.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ MaidSafe Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
MaidSafe Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
MaidSafe CoinMAID သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.106MaidSafe CoinMAID သို့ ယူရိုEUR€0.0898MaidSafe CoinMAID သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0811MaidSafe CoinMAID သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0967MaidSafe CoinMAID သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.959MaidSafe CoinMAID သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.669MaidSafe CoinMAID သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.36MaidSafe CoinMAID သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.396MaidSafe CoinMAID သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.142MaidSafe CoinMAID သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.148MaidSafe CoinMAID သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.37MaidSafe CoinMAID သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.821MaidSafe CoinMAID သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.573MaidSafe CoinMAID သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.94MaidSafe CoinMAID သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.17.78MaidSafe CoinMAID သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.145MaidSafe CoinMAID သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.16MaidSafe CoinMAID သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.31MaidSafe CoinMAID သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.738MaidSafe CoinMAID သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥11.22MaidSafe CoinMAID သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩126.01MaidSafe CoinMAID သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦40.13MaidSafe CoinMAID သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.8MaidSafe CoinMAID သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.93
MaidSafe CoinMAID သို့ BitcoinBTC0.000009 MaidSafe CoinMAID သို့ EthereumETH0.000279 MaidSafe CoinMAID သို့ LitecoinLTC0.00185 MaidSafe CoinMAID သို့ DigitalCashDASH0.00109 MaidSafe CoinMAID သို့ MoneroXMR0.00113 MaidSafe CoinMAID သို့ NxtNXT7.75 MaidSafe CoinMAID သို့ Ethereum ClassicETC0.0151 MaidSafe CoinMAID သို့ DogecoinDOGE30.47 MaidSafe CoinMAID သို့ ZCashZEC0.00114 MaidSafe CoinMAID သို့ BitsharesBTS4.17 MaidSafe CoinMAID သို့ DigiByteDGB4.02 MaidSafe CoinMAID သို့ RippleXRP0.363 MaidSafe CoinMAID သို့ BitcoinDarkBTCD0.00364 MaidSafe CoinMAID သို့ PeerCoinPPC0.365 MaidSafe CoinMAID သို့ CraigsCoinCRAIG48.11 MaidSafe CoinMAID သို့ BitstakeXBS4.5 MaidSafe CoinMAID သို့ PayCoinXPY1.84 MaidSafe CoinMAID သို့ ProsperCoinPRC13.25 MaidSafe CoinMAID သို့ YbCoinYBC0.00006 MaidSafe CoinMAID သို့ DarkKushDANK33.84 MaidSafe CoinMAID သို့ GiveCoinGIVE228.42 MaidSafe CoinMAID သို့ KoboCoinKOBO24.56 MaidSafe CoinMAID သို့ DarkTokenDT0.0975 MaidSafe CoinMAID သို့ CETUS CoinCETI304.57
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 20:45:02 +0000.